संघीय संसदमा मङ्गलबार नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै | CNNepal
संघीय संसदमा मङ्गलबार नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै
काठमाडौँ– सम्बोधनको पूर्णपाठ
थुप्रै प्रश्नहरु उठेका छन्, ६ ओटा संशोधन प्रस्ताव आएका छन्, १२३ जना माननियज्यूहरुले प्रतिनिधि सभामा विचार व्यक्त गर्नुभएको छ, छलफलमा सहभागिता जनाउनु भएको छ । पहिलो दिन ५४ जनाले दोस्रो दिन ६३ जनाले र आज तेस्रंो दिन ६ जनाले धारणा व्यक्त गर्नु भएको छ । थुप्रै विषयहरु यस क्रममा उठेका छन् । प्रकृति–प्रकृतिका विषय अनेक कुराहरु उठेका छन्, जुनसँग सम्बन्धित छ, त्यसमा सम्बन्धित विषयमा विषयगत ढंगले आफ्ना धारणाहरु राख्ने र प्रष्ट पार्ने कोसिस गर्नेछु ।
अहिले पनि नेपाली समाजमा एउटा सामन्ती सस्कार, सामन्ती मानसिकता यस्तो देखिन्छ जन्मसिद्ध ढंगले श्रेष्ठ हुँ भनेर दावी ग¥र्यो भने, जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको कुरा ग¥र्यो भने त्यो गाह्य मान्य हुने, त्यसको गरिमा हुने जस्तो ठानिन्छ । जनताद्धारा निर्वा्चित व्यक्तिहरु, सस्थाहरु, निकायहरु, जननिर्वा्चित सस्थाहरुको मान्यता कम हुने अथवा तिनको गरिमा नहुने यस प्रकारको एउटा मानसिकता देखिन्छ । हामीले त्यस्तो मानसिकता लिनु हुँदैन । जनताद्धारा निर्वा्चित जनप्रतिनिधिहरुमा जुन गरिमा छ, स्वघोषितहरुमा त्यो हुँदैन । त्यसकारण हामीले जनप्रतिनिधिहरुको व्यवस्था ल्याएका हौँ । जनप्रतिनिधि सम्मानित हुन्छन् । अनि जन्मसिद्ध श्रेष्ठताका, पाखण्डी सिद्धान्तका आधारमा सम्मानित हुने, गरिमामय हुने, जननिर्वा्चित गरिमामय नहुने हुँदै हुँदैन् । त्यो मानसिकता छोड्नपर्छ लोकतन्त्रको सम्बन्धमा, यो जननिर्वा्चित प्रणाली हामीले लडेर ल्याएका हौँ । जनतामा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न रहने यो प्रणाली हामीले ल्याएका हौँ ।
बाहिर निकाल्दा अचानक बलजफ्ति निकाल्न सकिदैन । त्यसको विकासबाट निकाल्न सकिन्छ । कृषि आधारित अन्य उद्योगहरुको स्थापना, अन्य व्यवसायको स्थापना, अरुगतिविधिहरु र उद्योग क्षेत्र वा सेवाका क्षेत्र वा पर्यटनका क्षेत्र विभिन्न क्षेत्रहरुको बृद्धि मार्फत मात्रै त्यहाँको जनसंख्यालाई बाहिर निकाल्न सकिन्छ । त्यस अनुसार नै बाहिर निकाल्न प्रयासहरु कृषि क्षेत्रको विकास, कृषि उत्पादन र उत्यादकत्वको वृद्धि, कृषिलाई अर्गा्निक तर्फ लिएर जाने कुरा, कृषि आधुनिकीकरण गर्ने र आधुनिक एउटा व्यवसायीक ढंगले सञ्चालन गर्ने कुराहरुतर्फ जोड दिइएको छ ।
कहीँ हामी चिया लगाउछौँ भने त्यो चिया निर्यात योग्य ढंगले उत्पादन हुन सकोस् । कफि लगाउछौँ भने त्यो हुन सकोस् । धान भए आत्मनिर्भर हुने गरी र त्यो भन्दा निर्यात हुने गरी हुन सकोस् । गहुँ त्यसैगरी, मकै त्यसैगरी हुन सकोस् । त्यसका लक्षणहरु देखिएका छन् । हुन त पानी परेर त्यस्तो राम्रो भएको भन्या छन् साथीहरुले । तर पानी त सधै पथ्र्याे । यसवर्ष धान पनि ९ प्रतिशत बढ्ने, समग्र कृषि पनि ६ प्रतिशतले भन्दा बढीले बढ्ने कुरा पानीले मात्र होइन । यस वर्ष मात्रै पानी परेको होइन होला । धान त पानी परेर बढ्यो ? अरु चाहि कसरी बढ्यो ? सब्जी चाहि कसरी बढ्यो ? फलफुल चाहि कसरी बढ्यो ? पानी नै परेर बढेको हो सबै ? त्यसो भए त खेती नै गर्न परेन नि पानी परिहाल्छ, खेती बढिहाल्छ । त्यस्तो होइन, योजनावद्ध ढंगका प्रयासहरु अगाडि बढाइएका छन् ।
कार्यकारी अधिकार नेपालको राष्ट्रपतिमा किनचित छैन भन्ने होइन । हाम्रो गरिमामय संसदले पारित गरेका कानूनलाई राष्ट्रपतिले दस्तखत गरेपछि कानून बन्छ । राष्ट्रपति शासन इर्मेजेन्सी जस्ता कुराहरु, सेना परिचालनजस्ता कुराहरु राष्ट्रपतिबाट हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिश गरेका कुराहरु राष्ट्रपतिबाट सदर भएपछि अन्तिम सदर हुन्छ र राष्ट्रपति भनेको केही पनि होइन, होइन । राज्य व्यवस्थाको सर्वोच्च र सम्मानित संस्था हो । राज्यव्यवस्थाको सर्वोच्च सम्मानित र अभिभावकीय भूमिकाको संस्था हो । त्यो संस्था साझा हुन्छ । त्यसकारण कुन पार्टीको सरकार बन्यो, कुन सरकार कसले नेतृत्व ग¥यो भनेर मेरो भन्ने की नभन्ने भन्ने हुँदैन । जसको बनेपनि राष्ट्रपतिको मेरो सरकार हुन्छ । कमसेकम अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्राक्टिक्स अलिकति बुझौंन ।
यो भुलचुकले परेको हो की भन्नुभयो, भुलचुकले होइन । यो सुविचारित ढंगले जानी बुझिकन राखिएको र आवश्यक शब्दावली हो त्यो भन्दा । राजा महाराजाले मेरो भन्ने जनताको प्रतिनिधिले अपनत्व नलिने, जनताको प्रतिनिधि संस्था, प्रतिनिधि निर्वा्चित सरकारलाई अपनत्व नलिने अथवा त्यो चाहि मेरो सरकार हो भनेर नभन्ने ? राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले मेरो सरकार भनेर सम्बोधन गर्नुपर्छ । र त्यो वाञ्छनीय हो । नत्र कसैकसैको चलन हुन्छ तिमी, तपाईं केही पनि नभनिकन भन्ने किन उसलाई तिमी भन्ने आँट पनि छैन्, तपाईं भन्ने मन पनि छैन् । त्यसो गरेपछि उसले अब यसो गर्दा राम्रो हुन्थ्यो, उसो गर्दा राम्रो हुन्थ्यो, यसो ठिकै हुन्थ्यो, उसो गर्दा हुन्थ्यो, यस्तो भए हुन्थ्यो सम्वोधन गर्दैन । किन तपाईं भन्न मन छैन्, तिमी भन्न आँट छैन् त्यस्तो गर्न ।
त्यसको सदुपयोग हुनु पर्छ्कि पर्दैन ? अनि ५७० रोपनी जमिन दिएको छ, ५।६ करोड दिएको छ एउटा विद्यालयलाई । सबैलाई त्यसै गरी दिन सकिन्छ की सकिदै् ? अहिले ट्यालेन्ट हण्ट गर्न, चार क्लास पढेका विद्यार्थी हण्ट गर्न अहिले हिड्नु पर्ने अवस्था छ ? अहिले त्यस्तो स्थिति छैन् । त्यो जमानाको स्थिति थियो, सन्र्दभ थियो, कारण थियो केही थियो । विभिन्न संघसंस्थाहरुका नाममा अब अहिले साल्ट टे«डिङका नाममा थुप्रो ठाउँमा थुप्रो जमिन अनुपयोगी ढंगले चाहि बसिरहेको छ । त्यसको साल्ट टे«डिङलाई ५।५ सय विघा, अर्को ठाउँमा ५।५ विघा साल्ट टे«डिङलाई । के गर्छ उसले खेती गर्छ की के गर्छ साल्ट टे«डिङ भनेको ? त्यसकारण त्यसको सदुपयोग गर्ने भनेको हो । यहाँ लुकाएर कुरा गरेको होइन । त्यो सदुपयोग गर्ने हो । संघसंस्थाहरुका जमिन खुला जमिन राख्नु पर्ने ठाउँमा खुला जमिन राख्नु पर्छ, पोखरी बनाउने ठाउँमा पोखरी बनाउनुपर्छ । खेल मैदान बनाउने ठाउँमा खेल मैदान बनाउनुपर्छ । बगँैचा बनाउने ठाउँमा बगैँचा बनाउनपर्छ । त्यो गर्नुपर्छ । अब यत्तिकै खेर फाल्ने र पैसा खर्च गर्दै जाने होइन । हामीले सदुपयोगको सिद्धान्त त्यो नीति लिनुपर्छ ।
युवा रोजगारीका लागि थुप्रै कार्यक्रमहरु ल्याइएको छ । सर्टि्फिकेट धितो राखेर लोन दिनेदेखि लिएर, योजना धितो राखेर लोन दिनेदेखि लिएर, योजना कसरी बनाउँने र कसरी धितो राख्ने भन्ने कुराहरु सिकाउने समेतदेखि, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमदेखि लिएर, युवा रोजगारीका कुराहरुदेखि लिएर यस्ता अनेक कार्यक्रमहरु ल्याइएका छन् । त्यसकारण आएको छैन भन्ने कुराहरु होइन ।
खर्च र राजश्वको लक्ष्य हासिल नभएको भन्ने साथीहरुको टिप्पणी त्यो उपयुक्त छैन । हाम्रो नीति कार्यक्रमले एउटा कुरा स्विकारेको छ कि हामीले काममा तिव्रता दिन सकेको छैनौँ । समयमा आयोजनाहरु पुरा गर्न सकेको छैन । के मेलम्चीको अघि मेलम्चीलाई विदा गरियो कि के भन्नु भो, विदा गरेको होइन भागेको हो । उसको आर्थिक अवस्था डामाडोल भो कम्पनीको त्यस कारण भाग्यो । तर मेलम्ती आगामि आर्थिक वर्ष्भित्र पुरा गर्ने हामीले योजना बनाउँदैछौँ र त्यो त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्ष भित्र मेलम्ची आउँछ काठमाडौंमा,
तसर्थ म आग्रह गर्न चाहन्छु प्रतिपक्षका माननीयजीहरु सबैलाई पनि यस पल्ट पनि यस नीति कार्यक्रमलाई सर्वसहमतीले पारितले गरौँ । संशोधन प्रस्तावहरु माननीयजीहरुले फिर्ता लिइदिनु बाञ्चनीय छ । यसलाई अब अरु केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन । सर्वसहमतीले पास गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, र, यस पछि रोष्टममा उभिएका बेला मैले म यहि २६ गते पर्सिबाट १ गते जेठ सम्मका लागि कम्वोडिया, भियतनाम पहिले त्यस पछि कम्वोडियाको औपाचारिक अफिसियल भ्रमण गर्दैछु । त्यसबाट टुरिजम प्रवद्र्धनदेखि लिएर, हाम्रो अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्धदेखि लिएर अनेक पक्षहरुमा सकारात्मक योगदान पुग्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ, विश्वास लिएका छौँ । त्यो उद्देश्यका साथ त्यो मेरो भ्रमण हुँदै छ ।
Previous articleनेपाल प्रहरीका २ एआईजीको सरुवा, प्रहरी एकेडेमीमा कार्की र काठमाण्डौं प्रहरी प्रमुखमा सुवेदी ।
Next articleजादा जादै १२ प्रहरी अधिकृतहरुलाई सम्मान गरी विदा भए काठमाण्डौं प्रहरी प्रमुख लामा